ခင်မမမျိုး| September 3, 2012 | Hits:3,867
မိုက်ခရို မန်နေဂျာတွေ အကြောင်းမြန်မာအတွက် ဝါရှင်တန်က ဘာလုပ်သင့်သလဲရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၃)ကလေးများနဲ့ အားကစား
Nhin September 4, 2012 - 3:10 pm good article… good wiring like an good essay…
Reply Eve September 4, 2012 - 11:54 pm Hla maung shwe, Soe thein and Aung min conspire to trick mr president thein sein
Reply Eve September 4, 2012 - 11:56 pm Hla maung shwe is stand man left of this photo, Soe thein hands up and smiling.
Reply MinAhPHay September 6, 2012 - 10:39 pm This is the excellent article.
Reply မမ September 8, 2012 - 10:27 am သိပ်ကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာမြင့်မြတ်
Reply tinwinhlaing September 8, 2012 - 9:51 pm အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မမျိုးရေ political science နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေရေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်။
Reply Pa Pa September 13, 2012 - 7:29 am This articles comment are written by Hla Maung Shwe groups and planning to kill